Puntland oo ka warbixisay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo ka warbixisay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish
Ciidamada Puntland oo howgallo ku jira
Bari (Halqaran.com) – Saacadihii la soo dhaafay, ciidamada Puntland ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyay dhulka buuraleyda ah ee Gobolka Bari, halkaas oo mararka qaar ay weerarro ka soo qaadaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Kooxda Daacish-ta Soomaaliya.
Howlgallada ayaa Saraakiisha hoggaamineysay waxaa ay sheegeen in sigaar ah looga sameeyay dhulka Buuraha ah ee Cal-miskaad iyo Calmadow, halkaas oo ah Xarumaha ugu waaweyn ee Al-Shabaab iyo Daacish.
Wasiirka Wasaaradda Amniga dowlad goboleedka Puntland, Mudane Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in meelaha ay howlgallada Ciidamada ka sameeyeen ay aheyd Goobihii ugu weeynaa ee Al-Shabaab iyo Daacish ay hubka iyo Agabka kale ay ku xareysan jireen.
Wuxuu intaasi raaciyay wasiirka in Ciidamada Puntland ay ka guuleysan doonaan cid kasta oo isku dayda inay sameeyso falal Amni darro, isla markaana howlgallada ay sii wadi doonaan.
Howgallo ka dhan ah Al-Shabaab